Forum serasera malagasy Ny tena tantaran'ny dinôzôra, fizaràna fahefatra - Dinika forum.serasera.org
Ny tena tantaran'ny dinôzôra, fizaràna fahefatra
Fitohizan'ny hafatra : Ny tena tantaran'ny dinôzôra, fizaràna fahefatra
Nehemiah - 25/07/2013 09:49
Ireto no dian-tongon-dinôzôra tsara indrindra hita tany Canada. Manam-pahaizana kristiana mandala ny fahariana no nahita azy ireo tany Kôlombia Britanika. Raha mijery tsara ianareo dia tsy ny dian-tongotra sy tanana no voarakitry ny vato fa ny dia navelan'ny onja koa.
Eritrereto anie : tsy mahatalanjona ve ny firaketan'ity vato ity an'ireto ? Tsy maintsy nivaingana haingana be ilay vato satria raha tsy izay dia voafafan'ny orana manaraka !
Raha mandia fotaka mando ianareo ka mbola voatazona ilay dia rehefa mainan'ny masoandro ilay fotaka dia misy tresaka kely eo, izay atao hoe "fissures de dessication" @ teny vahiny.
Fa tsy izay ve ianareo izay mivelona any avaratra-atsinanan'ny Nosy ?
Kanefa tsy mbola nahitàna dian-tongon-dinôzôra misy an'ireny tresaka ireny mihitsy. Midika izany fa voa nandia ny fotaka ny dinôzôra dia tonga dia nirakotra an'ilay dia ny rano. Zavatra nitranga eran'izao tontolo izao izay.
Hividy atodin-dinôzôra ? Indrisy moa fa tsy 350 Ar ny vidin'ny 1 fa 3,51 euros farafahakeliny miaraka @ fihenam-bidy .
Tsy mahita zavatra hafahafa ianareo ve ? Nahoana no manatody atody tsy dia ngeza manahoana ireto voary goaibe ireto ? Tsotra ny valiny : misy fetrany ny haben'ny atody 1. Raha lehibe loatra ny atody dia manjary mila akora matevina be (raha tsy izay dia manjary potsitra), hany ka tsy afaka miaina intsony ilay tsimony satria tsy tafiditra intsony ny rivotra.
Fantatrareo ve fa ny kiwi no vorona manatody ny atody lehibe indrindra raha ampitahaina @ haben'ny vatany ? 1/3-n'ny haben'ny vatany ny haben'ny atodiny, angamba maharary izany . Kanefa misy ny tombontsoa : adin'indray aorianan'ilay izy foy, mahaleotena tanteraka ny zanany.
Toy izao ny fitsinjaran'ny toerana nahitàna atodin-dinôzôra eran'izao tontolo izao :
Nahitàna an'ity ny atodina titanosaure (karazana dinôzôra mitovy @ Argentinosaure) tsy foy 1 :
Hoditra ilay izy. Hoditra voafôsily.
Kanefa tsy tokony ho tsy ampy 1 volana akory dia lo tanteraka ve ilay izy ? Toy izao angamba no zavatra nitranga :
- Nanatody ny dinôzôra.
- Norakofan'ny soson-dilatra manifinify ny atody (satria manjary potika ny atody raha matevina loatra ilay sosona).
- Nisy ranondranony mineraly miakatra avy any an-kibon'ny tany ka mifôsily ny atody sy ny ao anatiny. Raha mahatadidy ianareo dia izay no efa novelabelariko t@lohahevitra momba ny Safo-drano.
Hitanareo ve ny tiako iaviana ? Tsy afaka manome valiny mafaha-po ho an'ny zavatra novelabelarina eto ny uniformitarianisme (fandalàna ny tsimiovatantana), fa rehefa raisintsika ho marina kosa ny fitantaran'ny Genesisy dia mora foana ny manazava an'ireny.
Nehemiah - 25/07/2013 09:50
Nehemiah - 26/07/2013 08:16